Semalt: चार कारणहरू किन IT सेवा कम्पनीहरूसँग ब्लग हुनुपर्दछ
त्यहाँ धेरै आईटी सेवा कम्पनिहरु छन् कि व्यापार को दुनिया मा सफलता को आनंद, तर केहि कारण को लागी, केवल एक मुठीहरु को लागी एक वेवसाइट मा एक ब्लग छ। धेरै आईटी सेवा कम्पनीहरूले परम्परागत बिक्री प्रविधिको पालन गर्दछ वा यसलाई ब्लग चलाउनमा धेरै गाह्रो र समय खपत फेला पार्दछ। जे होस्, ती कम्पनीहरूले कम्पनी ब्लग चलाउँदछन् अन्ततः त्यसो गरेर पुरस्कार पाउने छन्। जुलिया वाश्नेभा, Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, ब्ल्याग चलाउँदा के फाइदाहरू आईटी सेवा कम्पनीहरूमा ल्याउँछ भनेर वर्णन गर्दछ।
सेवाहरूको विशिष्टता हाइलाइट गर्दै
सामग्री मार्केटिंग दुनिया भर मा व्यापार को विकास को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। धेरै व्यवसाय डिजिटल र मोबाइल जाँदैछन्, त्यसैले सामग्री मार्केटिंग नेतृत्व उत्पादन र भेदभावको लागि आवश्यक भएको छ। एकै समयमा, भिन्नता धेरै आईटी सेवा कम्पनीहरूको लागि केही समस्या हुनसक्दछ, किनकि तिनीहरू दिनहुँ उही व्यवसायहरूसँग व्यवहार गर्दछन्। जब तपाईं ब्लग सिर्जना गर्नुहुन्छ, तपाईं केहि अनौंठो सृष्टि गर्दै हुनुहुन्छ, जुन तपाईंलाई भीडबाट बाहिर खडा गराउँदछ। यसको प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो व्यक्तित्व, तपाईंको कामको नैतिकता, तपाईंको कम्पनीको चरित्र, आदि देखाउन सक्नुहुन्छ, जसले सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाईंको कम्पनी छनौट गर्न मद्दत गर्दछ।
धेरै आईटी सेवा कम्पनीहरू एक अर्कासँग मिल्दछन् किनभने उनीहरूले उस्तै शव्दहरू प्रयोग गर्छन्। त्यसोभए उनीहरू कसरी पक्का हुन सक्छन् कि तपाईको व्यवसाय अर्को कम्पनी भन्दा राम्रो छ? र कसरी सम्भावित ग्राहकले तपाईंको टोली काम पूरा गर्न पर्याप्त प्रवीण छ भनेर हेर्न सक्छन्? धेरै आईटी सेवा कम्पनीहरूले सामान्यतया मुखको शब्दहरू वा चिसो बोलावट सेवाहरूमा निर्भर गर्दछ, तर विचारपूर्वक विकसित ब्लगले नयाँ ग्राहकहरू प्राप्त गर्ने पूर्ण भिन्न, जटिल विधि खोल्न सक्छ।
कुनै पनि कम्पनीको वेबसाईटको 'हाम्रो बारेमा' पृष्ठ नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं दावी गर्नुहुन्छ कि तपाईंको प्रबन्धक वा नेतासँग यति धेरै वर्षको अनुभव छ, प्रत्येक अन्य कम्पनी जत्तिकै, स्पष्ट रूपमा, यो निराश देखिनेछ। ब्लगको सहयोगको साथ, यसको विपरित, तपाईं आफ्नो अनुभव र व्यवस्थापन कौशल प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूलाई अपील गर्दछ। यो गर्न अपेक्षाकृत सजिलो छ, तर त्यस्ता ब्लग पोष्टहरूले तपाइँ प्रचार गर्न चाहानु हुने सबैको सार प्रतिबिम्बित गर्दछ।
तपाइँको ब्यापार प्रचार गर्दै
आईटी सेवा समुदायलाई एकसाथ ल्याउनका लागि ब्लग एक उत्तम प्लेटफर्म बन्नेछ। जति सक्दो तपाईको कम्पनीको ब्लगमा लेख्नुहुन्छ, तपाईले छलफल थाल्नु भएको छ, जुन दुबै उद्योग व्यवसाय र ग्राहकहरूको लागि खुला छ। तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको प्रतिक्रियाले तपाईंलाई विभिन्न व्यक्तिहरूमा तपाईंको सेवाहरू प्रमोट गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो ब्लगमा सही सामग्री पाउनुभयो भने, यसले तपाईंको कम्पनीलाई नक्सामा राख्नेछ।
नयाँ नेतृत्वको उत्पादन
भर्खरैका अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि B2B कम्पनीहरू जसले ब्लग चलाउँदछन् उनीहरूसँग नभएका कम्पनीहरूको तुलनामा leads 67% बढी बढि उत्पादन गर्दछ, र B2C कम्पनीहरूले यस दरलाई तदनुसार 88 88% मा जिम्मेवार गर्दछ। जब तपाईं आफ्नो इनबाउन्ड मार्केटिंग रणनीति सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको ब्लग सधैं यसको एक महत्त्वपूर्ण अंश हुनुपर्छ। वास्तवमा, ब्लग पोष्टहरूमा खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) प्रविधिको प्रयोगले कम्पनीहरूलाई अझ राम्रो क्रम निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। क्षेत्र-सम्बन्धित सामग्रीको राम्रो मात्रा बिना, यो प्राप्त गर्न सम्भव हुने छैन। जब तपाईं एसईओ उद्देश्यका लागि तपाईंको ब्लग समायोजित गर्नुहुन्छ, तपाईं सम्भावित ग्राहकहरूको ध्यान आकर्षित गर्नुहुन्छ।
ब्लग सुरू र चलाउन कसैको निरन्तर प्रयासको आवश्यकता पर्दछ जो कडा परिश्रम, अनुसन्धानका लागि तयार छ र विषयको लागि उत्कटता राख्दछ। यद्यपि आईटी सेवा कम्पनीहरूले यस व्यवसायमा पार्ने सम्भावित असरका बारे सचेत हुनुपर्दछ। Semalt डिजिटल एजेन्सीका ग्राहकहरूले सफलतापूर्वक यो प्रमाणित गर्दछ कि ब्लग चलाउनको लागि लगानीमा फिर्ताको लागि यसको लायक हुन्छ।